Sida loo aqoonsado xiriirka xakamaynta - TELES RELAY
ACCUEIL » Galmada iyo xiriirada Sidee loo aqoonsanayaa inaad ku jirto xiriir xakameynaya
Sidee loo aqoonsanayaa inaad ku jirto xiriir xakameynaya
Teddy Oben 10 March 2019
In aad ku jirto xiriirka xakameyntu waxay dareemi karaan miisaan aad u tiro badan adigoo ku jajabinaya. Dareemaya sida haddii aad noqon doonto mid cabsi leh, gaar ahaan haddii aad bilawdo inaad dhibaato ka qabto lammaanahaaga. Laakiin waxaa jira rajo. Waxaanu wadajir u samaynay maqaalkan sidii loo ogaan lahaa haddii lagugu xakameynayo, iyo sida loo jebin karo caaryada.
Ku sarraynta xiriirka xakamaynta
Dhibaatadani waa la iska indha-tiri karo, laakiin qofka ilaaliya ayaa u baahan doona inuu kugu xukumo adiga. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato in lammaanahaaga uu ku jiro meel isku mid ah maaddaama ay ku jiraan noloshaada oo ay lumiyeen xakamayntooda. U fiirso lamaanahaaga. Ma waxay si joogta ah u raadsadaan shaqo ama la tacaalayaan dhaqaale ahaan? Miyay si fudud u siiyaan? Mararka qaarkood ma noqon karaan caadifad ahaan aan la heli karin? Ma degdegaan in lagu eedeeyo dadka kale sababtoo ah dhibaatooyinkooda? Adigoo kugu qasba, waxay ku soo laabanayaan xoogaa awood ah noloshooda.
Qabashada jaahwareerka iyo dhaleeceyn joogto ah
Xakamaynta dadku waxay jecel yihiin inay qabtaan jahwareer, gaar ahaan waxyaabo ay u muuqdaan kuwo aan muuqaal lahayn. Waxay sidoo kale qaadan karaan dembi xitaa waydiisashada caawimaad waxaa laga yaabaa inay noqoto mid weerar ah. Sababtoo ah qofkii doortay inuu ganacsi ku shaqeeyo waxay u badan tahay in uu leeyahay khibrad badan, isaga oo kicin kara qadhaadh iyo xanaaq aad adiga iyo habka ay u ogolaanayaan (oo kugu dhibaateeynaya geedi socodka). Tani waxay sidoo kale muujin kartaa naqdin joogto ah. Daacadnimo la'aan ayaa loo sheegaa inaadan fiicneyn ama aadan ku filnayn qaabkaada ama foomka, waxaad ugu dambeyntiiba awoodi doontaa inaad is-qiimeyso naftaada.
Waxaa laga soo qaaday saaxiibbadaada iyo qoyskaaga
Lammaanahaagu had iyo goor ma joogaa waxay kaa dhigeysaa mid xun ku saabsan inaad ku qaadato wakhti kuugu dhow adiga iyo ugu dhow? Miyaad dareemeysaa in lagugu qasbo inaad soo qaadato oo aad kala doorato isaga / iyada iyo iyaga? Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee xiriirka xakamaynta, hase yeeshee inta badan waa midka ugu fudud ee la iska indho-tiro. Waa run in markaad ku jirto xiriir cusub, waa wakhti aad ku qaadato kursiga dambe. Laakin ha ku dhicin inaad ka fikirto in jacaylku kaa ilaaliyo dadka aad ugu dhow. Isku-daadinta shabakada taageeradaadu waa habka buugta akhrinta ee kaa caawinaysa inaad isticmaasho.
Kormeer joogta ah
Kormeerka Obsessive waa astaanta kale ee tilmaamaya xiriirka xakamaynta. Sidoo kale waa wax aad u dhib badan. Dareemidda in dhaqdhaqaaq kasta oo aad la socotid lammaanahaaga waa in isla markiiba la garaaco gambaleelka digniinta. Iyadoo aan loo eegin haddii uu lammaanahaagu doorbidayo habka qarsoodiga ah ama uu ku qanacsan yahay inaad u sheegto wax walba, waa wax ka baxsan waxa aad u dulqaadanaysid. Koontaroolidda taleefankaaga, waxaad ku gashaa xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada, iyo inaad ku raacdid boosteejadaada oo dhan waxay noqoneysaa gabbasho. Ha u soo iibsanin marka ay kuu sheegaan in lagu khiyaaneeyey ama ay dhibaato ka haysato kalsooni, waa uun xagga hore si aad u ilaaliso amaanka.
Ciqaabtu waxay u socotaa
Xabashadu waa qalab xoog leh marka ay timaado in qof wax lagu qabto, oo marar dhif ah lagu arko xiriirka xakamaynta. Inaad la kulantid murugo dambiile ah markaad wax khalad ah sameysid waa caadi, maadaama ay raadineyso inaad saxdo (iyo cafi haddii aad ku sugantahay dhammaadka helitaanka!). Laakiin tani ma ahan fal dambiile ah oo loogu talagalay gacan-qabaha. Qofka kantaroolka ah ayaa ka dhigaya lammaanahooda inay dareemaan denbiile waxkasta oo ay sameeyaan. Xilliga ama wakhti dambe waxay taasi horseedi doontaa xaalad ah in lammaanaha la eedeeyayna ay ka fogaanayaan kharashyada oo dhan. Dhibaatada niyadeed ee daba-galka ah iyo koontaroolidda qofka ee awooda xukunka.
Waxaa la sameeyey si aad u dareentid inaad tahay qofka qalad ah
Qofka xakameynaya wuxuu noqon doonaa mid faraxsan markaad ku eedeyneysid. Dib u eeg soo noqo oo eeg haddii aad arki karto isbeddel natiijada doodaha laga yaabo inaad soo martay. Ma si joogto ah ayaa loo sameeyaa si aad dareemaysid qalad? Heerarka laba-labo ayaa qayb ka ah xakamaynta xakamaynta; hal xeer oo iyaga loogu talagalay, iyo mid kale oo adiga kugu habboon. Haddii aadan aheyn qulqul aan horjoogsaneyn, waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaad ogaato lammaanahaaga. Xakamaynta dadka badanaa waxay u egtahay inay ahaato mid isdaba-joog ah waxayna kugu caawinaysaa.
Daawee protatitis: ActiPotens waxay sameyn laheyd wax cajiib ah
Galmada galmada: waxay kordhin kartaa khatarta istaroogga